I-D&N - Ifulethi eliseduze ne-Conservatory, i-Old Tbilisi
T'bilisi, Tbilisi, i-Georgia
Leli yifulethi elivuselelwe elinethezekile elinezitini eziveziwe ezinomuzwa wangempela we-Tbilisi. Lesi situdiyo sinendlu yokugezela ekhanyelayo enobhavu wesimanje, umbhede ongusayizi wenkosi, usofa waseChesterfield nokunye. Isikhala (78 sq.m) silingana no-2 futhi sitholakala esifundeni sase-Old Tbilisi, emgwaqweni ohambisana nomgwaqo omkhulu wase-Georgia Shota Rustaveli Ave. Phezulu isivinini se-WIFI I-inthanethi ne-IPTV inikezwa mahhala. I-Apartment nayo itholakala kahle ezokuthutha iMetro Freedom Square & Rustaveli iziteshi ziyibanga lokuhamba.
I-Wifi – 16 Mbps
Ifulethi likwenye yezindawo ezimatasatasa enkabeni ye-Old Tbilisi, emgwaqweni ohambisana nomgwaqo omkhulu waseGeorgia (Shota Rustaveli Ave). Ngaphakathi kwebanga elihambayo lezindawo ezikhanga izivakashi njengezindawo zabahamba ngezinyawo, amabha, izindawo zokudlela, i-Opera, iminyuziyamu, i-Rustaveli Theatre, ibhilidi lePhalamende, iLiberty Square nokunye.
Hlola ezinye izinketho ezise- T'bilisi namaphethelo